News - Kormeerka CPC ee warshadeena
Qeybta ugu weyn ee laga codsado ee loo yaqaan 'calcined coke' ee Shiinaha waa warshadaha aluminium elektaroonigga ah, oo ka dhigan in ka badan 65% wadarta guud ee coke calcined, oo ay ku xigto kaarboon, silikoon warshadeed iyo warshado kale oo dhalaalaya. Isticmaalka coke-ka loo yaqaan 'calcined coke' ahaan shidaal ahaan wuxuu inta badan ku jiraa sibidhka, koronto dhalinta, dhalooyinka iyo warshadaha kale, taas oo ka dhigaysa qayb yar.
Waqtigan xaadirka ah, keenista iyo baahida loo qabo coke calcined asal ahaan waa isku mid. Si kastaba ha noqotee, dhoofinta qaddar badan oo hooseeya-baaruud hooseysa oo batrool ah, wadarta guud ee keenista coke ee kalluunka leh ayaan ku filnayn, waxayna weli u baahan tahay inay soo dejiso coke dhexdhexaad ah oo baaruud u ah oo kalsiin leh si loo kabo.
Iyadoo la dhisayo tiro badan oo ka mid ah unugyada coking sanadihii la soo dhaafay, soo saarista coke calcined ee Shiinaha ayaa la ballaarin doonaa.
Waxay kuxirantahay waxa kujira baaruudda, waxaa looqeybinkaraa coke-baaruud sareysa (maadada baaruudda 3% kahooseysa) iyo baaruud-baaruud hooseysa (sulphur ka hooseeya 3%).
Coke baaruudda hoose waxaa loo isticmaali karaa sida kondhiska anodic iyo anode horay loo dubay oo loogu talagalay warshadda aluminium iyo koronto garaafka dhirta birta.
Tayada sare ee baaruudda hoose (maadada baaruudda ka yar tahay 0.5%) ayaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro koronto garaafka iyo wakiilka kaarboonka.
Coke baaruudda hoose ee tayada guud (maadada baaruudda ka yar 1.5%) ayaa badanaa loo isticmaalaa soosaarida anodooyinka horay loo dubay.
Coke-ga batroolka oo tayadiisu hooseyso ayaa inta badan loo isticmaalaa in lagu dhalaaliyo cilmiga warshadaha silikoonka iyo waxsoosaarka jilitaanka anodic.
Coke-baaruud sare ayaa caadi ahaan loo isticmaalaa shidaal ahaan dhirta sibidhka iyo dhirta tamarta.
Muunad qaadista joogtada ah iyo saxda ah iyo tijaabinta ayaa qayb muhiim ah ka ah geedi socodka wax soo saarkeena.
Coke baaruudda badani waxay sababi kartaa dib-u-dhaca gaaska inta lagu jiro garaaf garaynta, taasoo keenta dildilaaca waxyaabaha kaarboonka.
Waxyaabaha ash ee sarreeya waxay hor istaagi doonaan crystallization-ka qaab-dhismeedka waxayna saameyn ku yeelan doontaa waxqabadka alaabada kaarboon
Tallaabo kasta ayaa si taxaddar leh loo tijaabin doonaa, waxaan rabnaa inaan sameyno waa sida saxda ah xogta ogaanshaha.
Iyada oo qayb ka ah nidaamkeena tayada xirmo kasta ayaa la miisaami doonaa ugu yaraan 3 jeer, si looga fogaado wixii khilaafaad ah.
Iyadoo aan lahayn cagajuglaynta maadada cagaaran ee calcined waa mid aad u saraysa, kuna dhow insulatorka, ka dib calcining ka, caabbintu aad ayey hoos ugu dhacday, waxay si aad ah ugu dhigantahay u adkaysiga coke batroolka iyo heerkulka calcined, ka dib markii 1300 ℃ ee saliida coke ee u adkeysata ay hoos u dhacday 500 μm Ω m. ama sidaa.